Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare oo saaka kormeer ku tagtay Goobaha uu ka socdo Imtixaankii Naqliga ahaa. – Ministry of Education in Puntland
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare oo saaka kormeer ku tagtay Goobaha uu ka socdo Imtixaankii Naqliga ahaa.
By editor	/ January 6, 2018
Sabti, 6 january 2018)-Gudoomeyeyaasha Waxbarsahada Goboladda, degmooyinka iyo maamulayaasha dugsiyada waxay si buuxda ayey fuliyeen , iyagoo Tixgalinaya warqaddii ka soo baxaday Xafiiska Waaxda Tayo-dhowrka iyo Kormeerka ee Wasaaradda Waxbarashda iyo Tacliinta Sare ee faraysay, xadidaysana xilliyada imtixaanaadka naqliga iyo shahaadiga.
Waxaana guud ahaan Gobolada Puntland ka furmay maanta imitixamadkii naqliga ee sanad- dugsiyeedka ee termka hore 2017-18, haddana waxaa la sugayaa in bisha 5aad ay ardayda fasalada 8aad iyo 12aad u fariistaaan imtixaanka shahaadiga ah.
Agaasimaha Waaxyada Tayo-dhowrka Wasaarada Waxbarashada iyo Tacliinta Sare C/Qaadir yuusuf Nuux ayaa fariin cad u diray gudoomiyeyaasha Waxbarashada si looga hortago tafararuqa , midaynta Waqtiga Fasaxna looga faa’iideysto waxii howlo ah ee taagan sida Tabarada, qorshe dajinta dugsiyada, saxidda iyo soo gudbinta imtixaanada iwm.
Gudoomiyaha Waxbarashada Gobolka Nugaal Xaashi Xuseen Faarax iyo ku xigeenka Waaxda Xafiiska Imtixaamadka faadumo Neero ku tagaya kormeer imtixaankii termaka saaka aroortii iyagoo qiimaynaya imtixaanka Tayadiisa iyo Macalimiinta iyo Ardayda ku jirta Imtixaanka.
Iskuulada Darwiish iskuulka New Waabari oo maamulayaashooda Cusub yihiin ayaa la jaan qaaday Hannaanka imtixaanaadka u baahanaa casriyayan iyo tayayn joogta ah si loo xaqiijiyo yoolasha iyo ujeedooyinka waxbarashada. iyo sare u qaadista aqoonta, xirfadda iyo wacyiga macallinku waxay saamayn toosa ah ku leedahay qiimaynota ubadkeenna. waxay kaloo xoojinaysaa nidaamka barbaarineed, qaadashada go’aanno caddaalad ah iyo gaaritaanka aqoon iyo asluub/dhaqan isu dheelli tiran.
Kormeeraha Guud iyo Xafiiska Imtixaamadka Wasaaradda Waxbarashada iyo Gudoomiyaha Waxbarashada Gobolka Nugaal ayaa aad u amaanay labada maamule oo isbadalka ku yimi bishii hore.
Kormeerkan imtixaanka Termka Ayaaa Gudoomiyaha Waxbarashada Xaashi Xuseen Faarax iyo Agaasimaha waaxda Tayo- dhowrka iyo Xafiiska imtixaamadka waxay u guurgaleen iskuulada kala ah Dugsiga hoose dhaxe ee Darwiish,Dugsiga New Waabari, Waabari iyo Maxamud aw cismaan ee Magalada Garowe.